Chroma Lighting ပါလာပြီး Sony Camera အသစ်နဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ Razer Phone 2
11 Oct 2018 . 3:54 PM
ဒီကနေ့ ပြုလုပ်သွားတဲ့ Razer Event လေးမှာ Gaming Smartphone အသစ်ပြင် Dual Storage Blade 15 နဲ့ Mercury Edition ဆိုပြီး မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို Gaming Foucs ကုမ္ပဏီကနေ အစဉ်လာမပျက် Gaming Product တွေ မိတ်ဆက်ပေးနေတာဆိုတော့ Razer Phone2မှာ ဘာတွေများ ထူးခြားလာခဲ့ပြီလဲ?
Along with Razer Blade 15
စမတ်ဖုန်း ဒီဇိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် အရင်နှစ် Razer Phone နဲ့ ဘာမှ ကွာသွားတာမရှိပါဘူး၊ ဘဝင်မကျစရာဖြစ်နိုင်တာက Aluminum Body အစား Wireless Charging အတွက် Glass Frame ပြောင်းသုံးလိုက်တာပဲ၊ ဒီအတွက် ဘာမှမပေးဆပ်လိုက်ရဘူးဆိုမယ့် Gaming စမတ်ဖုန်းလို့ အမည်ခံထားတဲ့ Razer ဘာတွေများ ထပ်ကွန့်ထားသေးလဲ?
Aluminum Body has been gone
Razer Phone2မှာ IP67 Standard ရှိလာတယ်။ ဒါက သာမန်ဖုန်းတလုံးအတွက် သိသာတဲ့အချက်မဟုတ်ပေမယ့် Gaming ဖုန်းတလုံးကို အပူထွက်လို့ Cooling Solution အပြင် ထူထည်တဲ့ ကိုယ်ထည်တွေနဲ့ ထုတ်နေရတာကိုမှ ရေစိုခံတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ Razer ထုတ်လာနိုင်တယ်။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောရဦးမယ်ဆိုရင် Razer Phone2မှာ Snapdragon 845 Processor ကို Adreno 630 GPU နဲ့ အားဖြည့်ထားတယ်။ ဒီ Specs အနေထားတိုင်းဆိုရင် PUBG နဲ့ Mobile Legends ဂိမ်းတွေကို Native 2560 x 1440p Resolution မှာ အထစ်ငေါ့မရှိ ကစားနိုင်မယ် ခန့်မှန်းရတာပဲ၊ 8GB RAM လည်း ပါတယ်ဆိုတော့။ ပြောချင်တာက High-end Specs တွေချည်း Razer သုံးထားတယ်။
ဖုန်းကိုလှမ်းရှိုးလိုက်ပြန်တော့ Body က ပါးပါးလပ်လပ်နဲ့၊ ROG ဖုန်းမှာ သီးသန့် Cooling Solution သုံးပြီး Body တောင့်တောင့် Gaming ဖုန်းထုတ်နေရချိန် Razer ကတော့ Slim ဒီဇိုင်းနဲ့ပဲ ရှိနေသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို နေနိုင်တယ်၊ အပူထွက်လည်း မမှုဘူးဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က Razer Blade 15 ဆီက ဆင်းသက်လာတယ်၊ အဲ့ဒီရဲ့ အငွေ့အသက်က Vapour Chamber Cooling ပါတဲ့။ Razer ဒီလို Idea ရသွားတာ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ Blade 15 မှာလည်း သေးသေးကျစ်ကျစ်ကိုယ်ထည်ကိုမှ High-end Specs တွေနဲ့၊ အပူကိုလည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်တယ်၊ Razer Phone2လည်း ဒီလို လာမယ်ထင်တာပဲ၊ အခုလိုသာ Thermal Issue မရှိ ပို Smart ကျကျ ဂိမ်းကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ROG တော့ နာပြီလေး။
Razer Phone2မှာလည်း 5.7” Screen ကိုပဲ ဆက်သုံးထားပြီး 120Hz ပြေးနေတဲ့ QHD (2560 x 1440) Display က HDR (High Dynamic Range) ရုပ်ထွက်တွေ ကိုင်တွယ်လာနိုင်ပြီ။ Screen အလင်းအားကိုလည်း 650nits အထိ ထောက်ပံ့ထားပြီမလို့ 513PPI ရှိနေတဲ့ Display က ကြည်လင်ရှင်းတောက်ပြီး ကြည့်ကောင်းနေမှာ အမှန်ပဲ။
Still old fashion way
ကင်မရာပိုင်းမှာ Optical Image Stabilization ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Sony Sensors ပြောင်းသုံးလာတဲ့အတွက် Camera ပိုင်း ပိုပြီး တိုးတက်လာပြီ ပြောရပါမယ်။ f/1.8 ရှိတဲ့ 12MP Main ကင်မရာကို f/2/6 ရှိ Secondary Camera နဲ့ Dual သုံးထားတယ်၊ ဒီ Camera ၂ လုံး Position ကို Samsung Galaxy Note9မှာလို အလယ်နား ပြောင်းထားထားတယ်။ Selfie အတွက် f.2.0 ရှိတဲ့ 8MP ကင်မရာသုံးထားတဲ့အတွက် လုံလောက်တယ် ပြောရပါမယ်။
Dual Sony OIS Camera has been switched
ဒီလို Basic Features တွေနဲ့ Hardware Changes တွေထက် ထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတာက Razer Blade လက်တော့တွေမှာလို Chroma Lighting ပါလာတာပါ။ ကျောဘက် Razer Logo ဟာ Chroma Effect နဲ့ လှပလာမယ်၊ 16.8 million Colours ထောက်ပံ့ထားသလို Chroma Apps နဲ့ Static ၊ Breathe ၊ Spectrum Cycling စတဲ့ Lighting Mode တွေ သုံးလာနိုင်မယ်။
Chroma Lighting on Razer Logo
ဒီ Effect တွေထက် Razer Logo ကို Notification Blinker ထားသုံးလို့ ရဦးမယ်၊ Noti တက်လာရင် Logo လေးက အချက်ပြမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ အဲ့လို မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် Chroma Lighting နဲ့ ကြိုက်သလို အလှသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
Light up within Chroma app
အသံပိုင်းမှာ နဂိုကတည်းက ဆရာကြီးဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ Razer Phone2ကိုလည်း Dolby Atmos Support၊ THX Certified Speakers တွေနဲ့ Audio ပိုင်း ရေရေလည်လည် အားဖြည့်ထားတယ်။ Razer ပြောတာတော့ Atmos စွမ်းအားကို ရှေ့ Speaker ၂ လုံး မှာသုံးထားတယ်၊ USB-C အသံထွက်ကိုလည်း 24-bit DAC ထပ် အားဖြည့်ထားတာဆိုတော့ ဂိမ်းကစားတာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါတွေမှာ အသံအနေထား ပြောင်းလဲမှုတိုင်း သတိထားမိနေမယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဘယ်နားဘာရှိနေမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနေနိုင်မယ့် သဘောလို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်၊ အထင်ကြီးစရာပေါ့နော်။
Stunning Razer Logo
ဒီ Razer Phone2ကို အားမရဆုံး အချက်ကိုပြောပါဆိုရင် ဒီဇိုင်းလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ သူ့ဘာသူ Vapour Chamber မကလို့ Liquid Cooling ပဲထည့်ထားထည့်ထား ROG Gaming ဖုန်းလောက် ဂိမ်းမင်းဟိတ်ဟန်ရှိမနေဘူး။ ROG ဖုန်းမှာ Modular Function တွေနဲ့ ဖုန်းအပူလျှော့ချဖို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်၊ Razer ကျ Blade 15 ပုံစံအတိုင်း Vapour Chamber ကိုပဲ အားကိုးထားတယ်။ ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းတမျိုးသုံးပြီး မူကွဲသွားအောင် ထုတ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။
Chroma Enabled Charging Deck for $99
ဘက်ထရီ 4,000 mAh သုံးထားတာ အားရစရာဖြစ်ပေမယ့် Android Pie နောက်မှ ထွက်တာတောင် Oreo ကြီးနဲ့ ထုတ်ချလာတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်ပြောပြော အာရှဈေးကွက် အနေထားကိုကြည့်ပြီး ဒီ Design ၊ ဒီ Flow နဲ့ Razer Phone2ထုတ်လိုက်တယ် ပြောရမယ်ထင်တာပဲ။ ဒီဘက်မှာက Gaming Oriented တွေများတာဆိုတော့ ဖုန်းထွက်လာတဲ့အခါကျမှ ဘယ်လောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာ သိရမှာပါ။ ဒီ Razer Phone2ကို ဒေါ်လာ 799 နဲ့ ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့တော့ ကြေညာထားပါတယ်၊ ဘယ်နေ့လဲဆိုတာတော့ ပြောမထားသေးပါဘူး။
Chroma Lighting ပါလာပွီး Sony Camera အသဈနဲ့ပှဲထှကျလာတဲ့ Razer Phone 2
ဒီကနေ့ ပွုလုပျသှားတဲ့ Razer Event လေးမှာ Gaming Smartphone အသဈပွငျ Dual Storage Blade 15 နဲ့ Mercury Edition ဆိုပွီး မိတျဆကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို Gaming Foucs ကုမ်ပဏီကနေ အစဉျလာမပကျြ Gaming Product တှေ မိတျဆကျပေးနတောဆိုတော့ Razer Phone2မှာ ဘာတှမြေား ထူးခွားလာခဲ့ပွီလဲ?
စမတျဖုနျး ဒီဇိုငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောရရငျ အရငျနှဈ Razer Phone နဲ့ ဘာမှ ကှာသှားတာမရှိပါဘူး၊ ဘဝငျမကစြရာဖွဈနိုငျတာက Aluminum Body အစား Wireless Charging အတှကျ Glass Frame ပွောငျးသုံးလိုကျတာပဲ၊ ဒီအတှကျ ဘာမှမပေးဆပျလိုကျရဘူးဆိုမယျ့ Gaming စမတျဖုနျးလို့ အမညျခံထားတဲ့ Razer ဘာတှမြေား ထပျကှနျ့ထားသေးလဲ?
Razer Phone2မှာ IP67 Standard ရှိလာတယျ။ ဒါက သာမနျဖုနျးတလုံးအတှကျ သိသာတဲ့အခကျြမဟုတျပမေယျ့ Gaming ဖုနျးတလုံးကို အပူထှကျလို့ Cooling Solution အပွငျ ထူထညျတဲ့ ကိုယျထညျတှနေဲ့ ထုတျနရေတာကိုမှ ရစေိုခံတဲ့ ကိုယျထညျနဲ့ Razer ထုတျလာနိုငျတယျ။
ဒါနဲ့ ဆကျစပျပွီး ပွောရဦးမယျဆိုရငျ Razer Phone2မှာ Snapdragon 845 Processor ကို Adreno 630 GPU နဲ့ အားဖွညျ့ထားတယျ။ ဒီ Specs အနထေားတိုငျးဆိုရငျ PUBG နဲ့ Mobile Legends ဂိမျးတှကေို Native 2560 x 1440p Resolution မှာ အထဈငေါ့မရှိ ကစားနိုငျမယျ ခနျ့မှနျးရတာပဲ၊ 8GB RAM လညျး ပါတယျဆိုတော့။ ပွောခငျြတာက High-end Specs တှခေညျြး Razer သုံးထားတယျ။
ဖုနျးကိုလှမျးရှိုးလိုကျပွနျတော့ Body က ပါးပါးလပျလပျနဲ့၊ ROG ဖုနျးမှာ သီးသနျ့ Cooling Solution သုံးပွီး Body တောငျ့တောငျ့ Gaming ဖုနျးထုတျနရေခြိနျ Razer ကတော့ Slim ဒီဇိုငျးနဲ့ပဲ ရှိနသေေးတယျ။ အဲ့ဒီလို နနေိုငျတယျ၊ အပူထှကျလညျး မမှုဘူးဆိုတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက Razer Blade 15 ဆီက ဆငျးသကျလာတယျ၊ အဲ့ဒီရဲ့ အငှအေ့သကျက Vapour Chamber Cooling ပါတဲ့။ Razer ဒီလို Idea ရသှားတာ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။ Blade 15 မှာလညျး သေးသေးကဈြကဈြကိုယျထညျကိုမှ High-end Specs တှနေဲ့၊ အပူကိုလညျး ကောငျးကောငျးကိုငျတှယျနိုငျတယျ၊ Razer Phone2လညျး ဒီလို လာမယျထငျတာပဲ၊ အခုလိုသာ Thermal Issue မရှိ ပို Smart ကကြ ဂိမျးကစားနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ROG တော့ နာပွီလေး။
Razer Phone2မှာလညျး 5.7” Screen ကိုပဲ ဆကျသုံးထားပွီး 120Hz ပွေးနတေဲ့ QHD (2560 x 1440) Display က HDR (High Dynamic Range) ရုပျထှကျတှေ ကိုငျတှယျလာနိုငျပွီ။ Screen အလငျးအားကိုလညျး 650nits အထိ ထောကျပံ့ထားပွီမလို့ 513PPI ရှိနတေဲ့ Display က ကွညျလငျရှငျးတောကျပွီး ကွညျ့ကောငျးနမှော အမှနျပဲ။
ကငျမရာပိုငျးမှာ Optical Image Stabilization ထောကျပံ့ထားတဲ့ Sony Sensors ပွောငျးသုံးလာတဲ့အတှကျ Camera ပိုငျး ပိုပွီး တိုးတကျလာပွီ ပွောရပါမယျ။ f/1.8 ရှိတဲ့ 12MP Main ကငျမရာကို f/2/6 ရှိ Secondary Camera နဲ့ Dual သုံးထားတယျ၊ ဒီ Camera ၂ လုံး Position ကို Samsung Galaxy Note9မှာလို အလယျနား ပွောငျးထားထားတယျ။ Selfie အတှကျ f.2.0 ရှိတဲ့ 8MP ကငျမရာသုံးထားတဲ့အတှကျ လုံလောကျတယျ ပွောရပါမယျ။
ဒီလို Basic Features တှနေဲ့ Hardware Changes တှထေကျ ထငျရှားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုဖွဈလာတာက Razer Blade လကျတော့တှမှောလို Chroma Lighting ပါလာတာပါ။ ကြောဘကျ Razer Logo ဟာ Chroma Effect နဲ့ လှပလာမယျ၊ 16.8 million Colours ထောကျပံ့ထားသလို Chroma Apps နဲ့ Static ၊ Breathe ၊ Spectrum Cycling စတဲ့ Lighting Mode တှေ သုံးလာနိုငျမယျ။
ဒီ Effect တှထေကျ Razer Logo ကို Notification Blinker ထားသုံးလို့ ရဦးမယျ၊ Noti တကျလာရငျ Logo လေးက အခကျြပွမယျ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ အဲ့လို မကွိုကျသေးဘူးဆိုရငျ Chroma Lighting နဲ့ ကွိုကျသလို အလှသုံးနိုငျပါသေးတယျ။
အသံပိုငျးမှာ နဂိုကတညျးက ဆရာကွီးဖွဈပွီးသားဆိုတော့ Razer Phone2ကိုလညျး Dolby Atmos Support၊ THX Certified Speakers တှနေဲ့ Audio ပိုငျး ရရေလေညျလညျ အားဖွညျ့ထားတယျ။ Razer ပွောတာတော့ Atmos စှမျးအားကို ရှေ့ Speaker ၂ လုံး မှာသုံးထားတယျ၊ USB-C အသံထှကျကိုလညျး 24-bit DAC ထပျ အားဖွညျ့ထားတာဆိုတော့ ဂိမျးကစားတာ၊ ရုပျရှငျကွညျ့တဲ့အခါတှမှော အသံအနထေား ပွောငျးလဲမှုတိုငျး သတိထားမိနမေယျ၊ ဒါကွောငျ့လညျး ဘယျနားဘာရှိနမေလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးနနေိုငျမယျ့ သဘောလို့ ပွောခငျြတာ ဖွဈမယျထငျပါတယျ၊ အထငျကွီးစရာပေါ့နျော။
ဒီ Razer Phone2ကို အားမရဆုံး အခကျြကိုပွောပါဆိုရငျ ဒီဇိုငျးလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။ သူ့ဘာသူ Vapour Chamber မကလို့ Liquid Cooling ပဲထညျ့ထားထညျ့ထား ROG Gaming ဖုနျးလောကျ ဂိမျးမငျးဟိတျဟနျရှိမနဘေူး။ ROG ဖုနျးမှာ Modular Function တှနေဲ့ ဖုနျးအပူလြှော့ခဖြို့ ဒီဇိုငျးဆှဲထားတယျ၊ Razer ကြ Blade 15 ပုံစံအတိုငျး Vapour Chamber ကိုပဲ အားကိုးထားတယျ။ ဖုနျးအတှကျဆိုရငျတော့ ဒီဇိုငျးတမြိုးသုံးပွီး မူကှဲသှားအောငျ ထုတျသငျ့တယျလို့ ကြှနျတျောထငျတာပဲ။
ဘကျထရီ 4,000 mAh သုံးထားတာ အားရစရာဖွဈပမေယျ့ Android Pie နောကျမှ ထှကျတာတောငျ Oreo ကွီးနဲ့ ထုတျခလြာတယျ။ ဘယျလိုပဲ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနတေယျပွောပွော အာရှဈေးကှကျ အနထေားကိုကွညျ့ပွီး ဒီ Design ၊ ဒီ Flow နဲ့ Razer Phone2ထုတျလိုကျတယျ ပွောရမယျထငျတာပဲ။ ဒီဘကျမှာက Gaming Oriented တှမြေားတာဆိုတော့ ဖုနျးထှကျလာတဲ့အခါကမြှ ဘယျလောကျအောငျမွငျမလဲဆိုတာ သိရမှာပါ။ ဒီ Razer Phone2ကို ဒျေါလာ 799 နဲ့ ရောငျးခပြေးသှားမယျလို့တော့ ကွညောထားပါတယျ၊ ဘယျနလေဲ့ဆိုတာတော့ ပွောမထားသေးပါဘူး။